Meel iyo iskaashi ayaa hagta ka qayb qaadashada bulshada ee mudnaanta sare - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Meel iyo iskaashi ayaa hagaya kaqeybgalka bulshada ee mudnaanta koowaad
Gobolnimadu waa mid ka mid ah mawduucyada ugu sarreeya ee qaabeeya shaqada kooxda ganacsiga sannadkan. Gobolka Washington wuxuu ku kala duwan yahay siyaabo badan, laga bilaabo dhaqaalaheena iyo deegaankeena ilaa taariikhdeena iyo dhaqankeena. Kala duwanaanta waa mid ka mid ah awoodayada ugu waaweyn ee dowladdeena, waxayna sidoo kale keentaa caqabado waaweyn.
Astaamaha iyo himilooyinka gaarka ah ee magaalooyinka Washington, magaalooyinka iyo quruumaha ayaa si weyn u kala duwan, una baahan wax ka badan hal-ku-habboon-dhan oo ku wajahan iskaashigeenna bulshada iyo kobaca dhaqaalaha.
Dawladeenu waxay leedahay dhaqaalo goboleedyo kaladuwan oo soo maray sanadihii u dambeeyay kobaca si aad u kala duwan. Ganacsigu wuxuu taageeraa jaaliyadaha iyada oo loo marayo faylalka guud ee ku dhowaad 100 barnaamijyada gobolka ee wax ka qabta baahiyo badan oo bulsho oo kala duwan, sida guryaha iyo hoy la'aanta, kaabayaasha dhaqaalaha, maaraynta kobaca, ganacsiga yar yar iyo horumarinta dhaqaalaha iyo tamar nadiif ah.
Sanadkii la soo dhaafay, waxaan bilownay mashruuc tijaabo ah oo naga caawinaya inaan ku dul dhisno faylalkaas caawimaad iyada oo loo marayo qaab ka duwan kaqeybgalka bulshada. Duulimaadkeenna "habab cusub" wuxuu la kulmayaa jaaliyadaha halka ay joogaan, isaga oo la kaashanaya hoggaamiyeyaasha maxalliga ah iyo dadka deegaanka sidii loo gaarsiin lahaa kaalmo farsamo oo ku habboon taas oo u dhiganta waxa xubnaha bulshada ay go'aamiyaan inay yihiin ahmiyadahooda ugu sarreeya.
Arimaha meel dhig horumarka dhaqaalaha. Bulshooyinka firfircoon - meelaha ay dadku doortaan inay ku noolaadaan, ka shaqeeyaan iyo ka ciyaaraan - ayaa muhiim u ah koritaanka, soo jiidashada iyo haysashada dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo shaqooyinka. Horumarinta dhaqaalaha iyo horumarka bulshada waxay kuwada socdaan gacmo gashi, iyo Ganacsigu waa lamaane ay ka go'an tahay magaalooyinka, magaalooyinka iyo bulshooyinka qabaa'ilka ee gobolka oo dhan si loo dhiso mustaqbalkooda ay ku tala jiraan.
Waxaan kaliya bilownay finalka seddexdeena bilow Habab Cusub duuliyeyaasha magaalada Toppenish.
Horumarka ku saabsan iskaashigeennii ugu horreeyay ee lala yeeshay Chewelah ayaa lagu soo qaatay wareysi idaacadeed oo lala yeeshay Duqa magaalada Dorothy Knauss.
Hoquiam, xubnaha bulshada ayaa hada ku mashquulsan labadooda mudnaan ee ugu sareysa si ay uga helaan caawinaad farsamo bartilmaameedka kooxda Ganacsiga sanadkan. Shaqo weyn ayaa ka socota beelahan dhexdeeda, iyada oo ay ugu wacan tahay ka qayb qaadashada dadweynaha ee cajiibka ah.
La kulanka bulshada reer miyiga ah halka ay joogaan, dhageysiga waxa ay u baahan yihiin iyo waxa ay doonayaan, iyo la shaqeynta iskaashi si gacan looga geysto jaantuska wadada hore ayaa ahayd mid aad u wanaagsan oo wax soo saar leh illaa iyo hadda.
Bishan sidoo kale waxaan sharaf u helay ka soo qayb galka iyo bixinta khudbado muhiim ah XuloMason munaasabad sanadle ah oo ay martigeliso Mason Development Development. Aad ayey u fiicneyd in lala kulmo xubno ka tirsan qabiilka Squaxin oo ku xir iyaga markii ugu horreysay ee Xiriiriyaha Qabiil ee Ganacsi Ernie Rasmussen.
Waxaan ku riyaaqay la kulanka iyo maqalka sheeko guul weyn oo ganacsi oo ka timid Bob Ames, aasaasihii Skokomish Mushrooms. Bob wuxuu ka qalin jabiyay barnaamij tababar oo qayb ahaan ay maalgelisay Ganacsi gacan ka gaystay ballaarinta ganacsigiisa. Hadda wuxuu gaarayaa 17 suuq wuxuuna iibinayaa 1200-1400 rodol oo boqosha ah bishii.
Waxay ahayd mid aad u xiiso badan in loo dabbaaldego lana wadaago dariiqa SelectMason ay u qaadayso inay ku taageerto bulshada iyadoo loo marayo dardargelinta isku xirnaanta ballaadhinta iyo iskaashiga kaabayaasha iyo horumarinta ganacsiga.
Deeqaha bulshada iyo amaahdaCusboonaysiinta Agaasimahahorumarinta dhaqaalahaLisa Brownganacsiga yaryarXoojinta bulshada
← Ganacsigu wuxuu bilaabi doonaa inuu aqbalo codsiyada Barnaamijka Raasumaalka Hormarinta Maktabadda 17-ka Maarso Cusboonaysiinta Agaasimaha Febraayo →